8 poindi ekuchengetedza emagetsi emabhasikoro emagetsi
musha Blog 8 poindi ekuchengetedza emagetsi emabhasikoro emagetsi
Zuva ： 2021-07-26 Zvikamu:Blog Views: 1,636 maonero
Vanhu vazhinji vanotasva mabhasikoro emagetsi, asi vanhu vazhinji havazivi kuchengetedza mabhasikoro emagetsi. Chinhu chakanyanya kukosha che a motokari mabhasikoro is motokari mabhasikoro mabhatiri. Ngatitaurei nemi nezve maitiro ekuchengetedza bhatiri.
1. Simba bhatiri rine rakadzika kubhadharisa uye kuburitsa kunosarudzwa.
Ivo vanoshandisa tiye ari kushanda hunhu hwebhatiri mune bhasikoro remagetsi ndiyo yekubuditsa yazvino idiki, nguva yekushandisa yakareba, kudzika kwekubuda kwakadzika, uye haigone kubhadhariswa uchityaira. Iyo yakareba iyo daro rekutyaira, iyo yakadzika kudzika kwekubuda, senge kutyaira 30-40Km pazuva, kudzika kwekubuda kunosvika panosvika 60% kusvika 80%. Naizvozvo, kana iwe uchida kuchengetedza bhatiri remagetsi bhasikoro, iwe unofanirwa kutanga wasarudza simba-mhando bhatiri ine yakadzika kuchaja uye kuburitsa.
2. Isa bhatiri zvakasimba.
Kana iwe uchida kuchengetedza bhatiri, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti bhatiri rakaiswa zvine simba pabhasiketi yemagetsi kudzivirira bhatiri kubva mukukuvadzwa nekuzunguzika panguva yekukwira. Kana bhatiri iri risiri iro uye rakasununguka mazuva ese, bhasikoro remagetsi richakurumidza kutyorwa.
(Cherekedza: Mupepeti we "Easy Shopping" anoyeuchidza munhu wese: Kana iwe ukakwira bhasikoro remagetsi kusimudza nekusiya vana vako mazuva ese, iwe unofanirwa kutarisisa zvakanyanya kune izvi. Usangoerekana wakonzera tsaona nekuda kwebhatiri rakasununguka. kana kuputsa mwana wako.)
3. Bvisa imwe tsvina kubva mubhatiri bhokisi.
Kazhinji bvisa guruva netsvina pabhatiri bhokisi, uye uteerere kuchengetedza bhatiri rakaoma uye rakachena kudzivirira bhatiri kubva pakuburitsa roga. Izvi zvingaite kunge zvisingaonekwe, asi zvinonyanya kubatsira kuchengetedza bhatiri mashandiro.
4. Zvinorambidzwa zvachose kuburitsa pachena kuzuva.
Chengetedza bhatiri remabhasikoro emagetsi kure neepamusoro-tembiricha yekupisa. Mumwaka unopisa, zvakanyatsorambidzwa kuburitsa pachena kune chairo chezuva (kunyanya kutarisirwa kunofanira kubhadharwa kana uchichengeta bhasikoro remagetsi muzhizha). Teerera kune yakanaka kufefetedza kana uchiraja.
5. Tsiva bhatiri munguva.
Kana bhatiri rakatsemuka kana iyo electrolyte ichidonha, bhatiri rinofanira kutsiviwa kudzivirira kuora kweasidhi.
6. Shandisa tsoka yekutsigira kubatsira painenge ichitanga
Kana bhasikoro remagetsi richangotanga, rinofanirwa kutangwa netsoka yekudzivirira kudzivirira zvakanyanya kubuda parizvino kubva mukukuvadza bhatiri; kana uchitasva, teerera kuti usanyanya kuburitsa bhatiri. Kuwedzeredza-kuburitsa kunogona kukonzera kurasikirwa kwakanyanya kwebhatiri, kunozopfupisa hupenyu hwayo hwebasa.
7. Usapfuure mutoro.
Kuremerwa kwakanyanya kwebhasikoro remagetsi kunozotungamira mukuwedzera kwemota yazvino, kukonzeresa bhatiri kunyanyisa-kuburitsa, uye kuderera kwekutanga kwebhatiri, uko kunokanganisa zvakanyanya hupenyu hwebhatiri. Dzimwe shamwari dzakapofumadza nekuteedzera kutakura mutoro wemagetsi emabhasikoro emagetsi, kunyanya kana uchichovha bhasikoro kutakura vanhu, izvo zvinongotyora zvakanyanya mitemo yemumigwagwa, asi zvakare zvinokuvadza
kuchengetedza mabhasikoro emagetsi.
8. Bhatiri rinofanira kuita recharga kanokwana kamwe pamwedzi mitatu.
Bhatiri rinogona kubhadhariswa mushure mekushandisa, uye iwe unofanirwa kuribhadharisa sezvaunoishandisa kuti uone kugadzikana kwerwendo runotevera. Iwe unofanirwa kuchaja uye kuchengetera kana isiri kushandiswa, chii chakanyanya, recharge kanokwana kamwe chete pamwedzi mitatu kudzivirira kusagadziriswa kuchimisirwa bhatiri.
Wese munhu anofanirwa kuchengeta izvi mupfungwa, zvakakosha kwazvo mukuchengetedza mabhatiri emagetsi ebhasikoro.
Kana iwe uchifarira bhasikoro remagetsi, unogona kutirovera runhare. www.vadar.com.
Tags:motokari mabhasikoro Mabheteri emabhasikoro emagetsi
Prev: Magetsi bhasikoro ekuchengetedza matipi (2)
Next: Nzira dzekuchengetedza dzemagetsi mota yemabhasikoro
Nei ndichida bhasikoro remagetsi re1000W
Kukundikana uye kugadzirisa kweye ebike controller
Magetsi Bhasikoro Mabhatiri Musika Kukura Kuongorora
Mid-drive motokari motokari yebhaiski 26 inch
Kune rimwe bhasikoro reguta rinogadzirwa pano
Simbisa bhajiki yako yegesi yakare pamberi pechiedza kusvika kutsva mberi kwechiedza
26-inch magetsi yekutengesa bhasiki ne hydraulic brake
Motokari yemagetsi china ne 350W mid- drive motokari